पहिला ब्लगिङ कल्चरको त राम्रोसँग विकास गरौँ: सिद्दार्थ पुडासैनी - MeroReport
पहिला ब्लगिङ कल्चरको त राम्रोसँग विकास गरौँ: सिद्दार्थ पुडासैनी
नुवाकोटमा जन्मेर पाटनमा हुर्केका सिद्दार्थ पुडासैनी आफुलाई शान्त प्रवृतिको मान्छे भन्न रुचाँउछन् । बिजनेस स्टडिजमा स्नातक गरेका पुडासैनी अहिले विषयवस्तु लेखक र एसईओ विश्लेषकका रुपमा काम पनि गर्छन । साथीहरुले उनलाई निराशावादी तर रोमान्टिक भन्छन् र उनी साथीहरुलाई पूर्णरुपमा विश्वास पनि गर्छन् । लेख लेख्न, चित्र बनाँउन अनि घुम्न पनि खुबै मनपराउने पुडासैनी यसका अलावा ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै सिद्धार्थ पुडासैनीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
मलाई सृजनशिल मान्छे भने हुन्छ । म किताबको किरो नै हुँ । चुरोट खाने मान्छेलाई 'चेन स्मोकर' भने जस्तै मलाई 'चेन रिडर' भने हुन्छ । नयाँ कुराहरु जान्न र साथी बनाउन साह्रै मनपर्छ । साथीहरु भनेपछि मरिहत्ते गर्छु ।
अनि सोसल मिडियामा नि?
म आफूलाई सामाजिक र ब्यक्तिगत बिषयक ब्लगर भन्छु । तर प्राय: म अलि हाँस्य ब्यंगात्मक पोष्टहरु गर्छु । चाहे त्यो देशको दुखद स्थितिको बारेमा लेख्दै किन नहोस् !
मैले ब्लगिङ गर्न थालेको धेरै भयो । ब्लगमा हेरे, मैले ब्लगिङ चाहिँ मे २००६ देखि शुरु गरेको रहेछु । म एकदिन घरमा भाईहरुलाई हावा तालमा ड्रागन र मान्छेको कथा भन्दै थिएँ । उनीहरुलाई मनपरेछ । अनि शुरु भयो लेखन यात्रा ।
मलाई कथा सुनाउन र आफ्नो मनका कुराहरु बाँड्न एकदमै मनपर्छ, त्यसैले पनि ब्लगिङ गर्छु । ब्लगिङ शुरु गर्न सजिलो छ तर निरन्तरता दिन भने गाह्रो छ । चुनौती भनेको केका लागि ब्लगिङ गरेको हो त्यसमा भरपर्छ । प्रशिद्धिका लागि ब्लगिङ गर्ने हो भने त धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ तर मनका कुरा लेख्न मात्र भए त त्यति गाह्रो छैन । नियमित पाठक पाउन चाहिँ साह्रै गाह्रो छ ।
आफ्नो ब्लगमा कस्ता सामग्रीहरु राख्न रुचाउनुहुन्छ र किन?
मैले लेखेका कथा, जिवनमा घटेका रोचक र टिठलाग्दा घटनाहरु राख्छु । म प्राय: मेरा पोष्टहरुमा एक दुईवटा सन्देश पनि घुसाउने प्रयास गर्छु । अरु ब्लगर साथीहरु पनि मेरो ब्लगमा कहिलेकाहिँ लेख्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ कि ब्लग भनेको रमाइलो खालको हुनुपर्छ । ब्लग पढिसक्दा डिप्रेशनको गोली खान पर्ने नहोस् भन्ने सोच्छु ।
ब्लगको नाम कसरी राख्नुभयो बताईदिनुस् न ।
ब्लगको न्वारन गर्ने बेलामा के लेखौँ के भएर "ओपन ब्रेनस" राखेको हुँ । पछि सबैले त्यहि नामले चिन्न थालेपछि नाम परिवर्तन गर्न पाइन । तर नाम मन नपर्ने चाहिँ होइन । ब्लग अनुसार त ठिकै लाग्छ । म मेरो आफ्नो लेखकिय नाम चाहिँ पुसैंन सिद प्रयोग गर्छु ।
अहिले सम्म सदुपयोग भएको मात्र देखेको छु । केहिले अश्लिल साहित्य पनि लेख्छन् तर म त्यसलाई दुरुपयोग भन्दिन । त्यो पनि साहित्यको एक पक्ष नै हो ।
मलाई फिल्म निर्माण, स्कृप्ट लेखन र अभिनयमा निकै चासो लाग्छ । म हलिउड सिरिजहरु पनि एकदमै धेरै हेर्छु । र मलाई उपन्यासहरु पढ्न सबैभन्दा बढि मनपर्छ ।
पढ्छु । मैले पढेका राम्रा ब्लगहरुमा आयशा राई गुरुङ र चक्रित सुवेदीको ब्लगहरु मनपर्छ । सुरथ गिरी र आकार अनिलको ब्लग पनि कहिलेकाहिँ हेर्छु । अनन्दिता गुरुङको ब्लगबारे भर्खरै मेरोरिपोर्ट कै माध्यमबाट थाहा पाएँ ।
नेपाली ब्लगरहरुले लेख्ने नै समाजमा यो भएन र त्यो भएन भनेर त हो नि । अनि सोसल मिडियामा अलि अलि कुरा हुन्छ अनि जस्ताको तस्तै । हामी ब्लगरहरु बरु भेला भएर त्यस्ता सामाजिक विषयमा केहि गर्न सके पो हुन्थ्यो ।
अनि ब्लगिङ वा ब्लगरका लागी आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको हुन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिता?
पक्कै पनि जरुरी छ । तर अहिले नै त खासै जरुरी देख्दिन । पहिला ब्लगिङ कल्चरको त राम्रोसँग विकास गरौँ । ब्लग पोष्ट चोरीको कुरा कहिलेकाहिँ सुन्छु । त्यो सुन्दा चाहिँ नरमाइलो लाग्छ ।
प्राय: मान्छेहरु फेसबुक र ट्विटरमा धेरै व्यस्त भएको देख्छु । ब्लग मार्केटिङको लागि ठिक कुरा भएपनि त्यसैमा झुन्डिनु आफैँमा चाहिँ निकै गलत हो । मैले अरु ब्लगरहरुले आचारसंहिता पालना नगरेको त खासै थाहा पाएको छैन ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना वा प्रसंग भए सुनाउनुस् न ।
त्यस्तो खासै घटना त छैनन् । तर एकचोटी 'खेलौनाको लोभले झण्डै पकौडा भको थेँ' भन्ने मेरो पोष्ट मम्मीलाई देखाउँदा ढाडमा धाप मार्नुभएको थियो । त्यो बेलामा चाहिँ केक्कनै गरेछु जस्तो लागेको थियो । र मलाई पोष्ट अनुसार नै बच्चाहरुको अनौठा फोटो हाल्न मनपर्छ । पहिला मान्छेहरु के हालेको त्यस्तो भन्थे, अहिले त त्यहि एउटा स्टाइल जस्तो भइसक्यो ।
तपाँइ सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभएको छ नि?
ट्वीटरमा सुचना आदानप्रदान छिटो हुन्छ अनि रमाईलो पनि छ । फेसबुक पनि मान्छे चिन्न एकदमै उत्तम छ । ब्लगहरु भने सबैको लागि होइन जस्तो लाग्छ ।
नागरिक पत्रिका भन्न सकिन्छ । तर ब्लग र ब्लगरहरु अझै ब्यवस्थित छैनन् । नेपाली ब्लगरहरुलाई अझै मञ्च मिलिसकेको छैन ।
धन्यवाद । मेरोरिपोर्ट टिमलाई । मेरोरिपोर्ट मार्फत नै अरु नेपाली ब्लगरहरुको बारेमा थाहा पाएँ । मेरो रिपोर्टको ब्लगर अफ द विक सेक्सन मनपर्‍यो ।
Comment by Amuna Chapagain on November 19, 2014 at 4:46pm
Congratulations Siddhartha Jee !!
Comment by Prakash Lamichhane on November 19, 2014 at 4:37pm
Congratulations Siddartha ! Keep Blogging. :)